मधु राई - कान्तिपुर समाचार
मधु राईका लेखहरु :
चित्र कोर्दै, लेखपढ सिक्दै
युकेजीमा पढ्ने श्रेया आले मगरलाई चित्रकारिता मन पर्छ । कक्षाकार्य सकेपछि चित्र कोर्न र रंग भर्न मन पराउने उनले कहिलेकाहीँ शिक्षकले भन्दा राम्रो चित्र कोर्छिन् र फूलबुट्टा पनि भर्छिन् । त्यसो त, श्रेयाका अरू साथी पनि चित्र कोर्ने भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । हरेक दिनजसो अंग्रेजी र विज्ञानको कक्षाकार्य सकिएपछि उनीहरूले विद्यालयले दिएका सादा कापीमा विभिन्न चित्र बनाउने र रंग भर्ने गर्छन् । गिलास र कप बनाउन पनि सिक्दै छन् ।
प्लास्टिकले बेरिएका हामी
दुई दशकअघि मलाई सिक्किमको गान्तोक सहर घुम्ने अवसर जुर्‍यो । मलाई त्यहाँको रमणीय दृश्यले मात्र तानेन, पूरै सहर प्लास्टिकमुक्त देख्दा अचम्मै परेँ । फोहोर संकलन गर्ने गाडीले बिहानबिहान सिटी बजाएपछि सबैले आ–आफ्नो फोहोर लिई घरअगाडि उभिनुपर्ने नियम गज्जबै लाग्यो । बाटोछेउ खानेकुरा बेच्न नपाइने रहेछ । बजारक्षेत्रको पसलबाहिर हामीकहाँ जस्तो सामानहरू असरल्ल झुन्ड्याउन पनि बन्देज लगाइएको रहेछ ।
पाठ्यपुस्तक हुन् कि प्रतिवेदन ?
श्रावण २९, २०७८
कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुनुअघि विराटनगरकी एलिशा शर्माले कक्षा यूकेजी उत्तीर्ण गरिसकेकी थिइन् । लकडाउन खुलेपछि पनि उनले केही महिना पुरानै विद्यालयमा यूकेजी दोहोर्‍याइन् । दोस्रो लहरले गर्दा यस वर्ष पनि विद्यालय जान पाएकी छैनन् । कक्षा एकको पुरानो पुस्तक ल्याएर घरैमा पढ्न थालेकी छन् ।
पहिले सीप अनि रोजगारी
यसपालि बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरेर न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरी आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उत्पादनसँग नजोडिने शिक्षा
एसएलसी सकाएर मेरा छोराछोरी उच्च शिक्षाका लागि एक दशकअघि काठमाडौं आएका थिए । विद्यालय पढ्दाताका भातभान्सामा सघाउने गरे पनि उनीहरू कतिपय तरकारी खाँदैन थिए । काठमाडौं आएपछि बेलाबेला फोनमा ‘ममी, लसुन र प्याजको पात कस्तो हुन्छ ?’ भनेर सोध्ने गर्थे ।
गत वर्षको जस्तै यसपालि पनि कोरोना–कहरबीच धेरैको बिहे भयो, गरियो । घरआँगनमा पाल टाँगेर वा पार्टी प्यालेसमा तामझामका साथ बिहेभोज पनि खुवाए । कतिपय जोडी भने कहिले निषेधाज्ञा खुकुलो होला र बिहे गरौंला भनेर कुरिरहेका छन् ।
पुस्तकबाट टाढिँदै शिक्षक
‘खै कतिखेर पढ्नु होउ, म्याम ! म त भ्याउँदै भ्याउँदिनँ ।’ ‘म त लोकसेवाको तयारीमा छु, पढ्नै भ्याउँदिनँ ।’‘म त अनलाइनमै पढ्छु, दिदी !’
विराटनगर–११ स्थित एउटा उच्च माविमा विज्ञान संकायमा पढ्दै गरेकी सिर्जना राईलाई केही साताअघि ह्वाट्सएपमा ‘तपाईंलाई २५ लाख भारुको चिट्ठा परेको छ’ भन्दै उनको फोटोसहितको संक्षिप्त जानकारी आयो । उनले यसबारे परिवारलाई सुनाइन्, तर कसैले पत्याएनन् । यसरी केही दिनसम्म लगातार चिट्ठाको रकम छुटाउन २५ हजार भारु बुझाउनुपर्छ भनियो ।